ချစ်သူရည်းစားဖြစ်ခါစမှာ မိန်းကလေးတွေ ဘယ်တော့မှ မပြောပြတဲ့အရာ (၅)ခု – Gentleman Magazine
မိန်းကလေးတွေက နားလည်ရခက်ကြပါတယ်။ သူတို့ ဘာလိုချင်လဲ၊ ဘာဖြစ်ချင်လဲ၊ သူတို့စိတ်ထဲမှာ ဘာတွေရှိနေလဲဆိုတာကို အပြည့်အ၀နားလည်နိုင်တဲ့ ယောင်္ကျာလေး မရှိသလောက်ရှားပါလိမ့်မယ်။ ဒီလို နားလည်ရခက်တဲ့အထဲကမှ ချစ်သူရည်းစားဖြစ်ခါစမှာ မိန်းကလေးတွေဖက်က ဖွင့်ပြောလေ့မရှိပဲ အချိန်ကြာမှ သိလာနိုင်တဲ့ အချက်(၅)ခုကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
၁။ ယောင်္ကျားလေး ဘယ်နှစ်ယောက်နဲ့ အတူနေခဲ့ဖူးလဲဆိုတာ…
ဒါလေးများ အတင်းမေးလို့ရနိုင်တာပဲလို့ ထင်မိပါသလား။ သင်အနေနဲ့ အတင်းမေးရင်တော့ မိန်းကလေးတွေက ပြောပြမှာပါ။ ဒါပေမယ့် တကယ်အတူနေခဲ့ဖူးတဲ့ အရေအတွက်ရဲ့ နှစ်ဆဖြစ်နေနိုင်သလို ထက်ဝက်လျှော့ပြီး ပြောတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သူတို့ပြောတဲ့ အရေအတွက်က သူ့တို့နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လိုထင်စေချင်လဲ ဆိုတာပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။ ဘယ်တော့မှ အရေအတွက် အမှန်ကိုပြောမှာမဟုတ်ပါဘူး။
မိန်းကလေးတွေကလည်း အပျော်တွဲချင်တာမျိုး ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီအကြောင်းကို ဘယ်တော့မှပြောမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်နေပါစေ။ သူတို့ကို တန်ဖိုးထားတာမျိုးကိုပဲ လိုချင်တာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အခြေအနေမဟန်ရင် သူတို့ဖက်က အကြောင်းအမျိုးမျိုးပြပြီး လမ်းခွဲသွားပါလိမ့်မယ်။ ကံမကောင်းရင် သင့်အမှားအနေနဲ့တောင် ခေါင်းစဉ်တပ်ခံရနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့က အပျော်တွဲချင်တာပါ။
၃။ အလှပြင်ပစ္စည်းတွေအတွက် အများကြီးသုံးစွဲတာ….
သင့်ကောင်မလေးက သဘာဝအတိုင်းလှပနေပြီး မနက်ခင်းတိုင်း၊ ညခင်းတိုင်းမှ လှပနေတယ်လို့ အထင်ကြီး မစောပါနဲ့ဦး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ မိတ်ကပ်တွေ မသုံးပဲ လှနေအောင် ဒါမှမဟုတ် မိတ်ကပ်မသုံးဘူးလို့ ထင်ရလောက်အောင် သုံးရတဲ့ အလှကုန်နဲ့ မိတ်ကပ်တွေရဲ့ ကုန်ကျစရိတ်က သာမန်မိတ်ကပ်တွေရဲ့ နှစ်ဆလောက်ရှိပြီး သင့်တစ်လစာ ဈေးသုံးစရိတ်ရဲ့ သုံးဆလောက် ရှိပါတယ်။
၄။ နေ့တိုင်းမှာ အခြားကောင်လေးအသစ်တစ်ယောက်ကို ကြိတ်ကြွေလေ့ရှိတာ….
ယောင်္ကျားလေးတွေက ကောင်မလေးချောချောလေးတွေရင် တစ်ချက်လောက်တော့ ကြည့်လိုက်မိသလိုမျိုးပါပဲ။ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း မိန်းကလေးတွေ စိတ်ထဲမှာ ကြိတ်ကြွေမိသွားတဲ့ ကောင်လေးတွေရဲ့ အရေအတွက်က ခန့်မှန်းမရနိုင်ပါဘူး။
၅။ အပြာကား ဘယ်လောက်ထိ ကြည့်ဖူးတာ/ ကြည့်နေတာ….
များသောအားဖြင့်တော့ မိန်းကလေးတွေရဲ့ ကိုးဆယ်ရာခိုင်နှုန်းလောက်က အပြာကားမကြည့်ဖူးဘူးလို့ ဖြေပါလိမ့်မယ်။ ကျန်တဲ့ ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းက ကြည့်ဖူးတယ်လို့ ဖြေရင်တောင်မှ ဘယ်လောက်များများကို ကြည့်ဖူးလဲဆိုတာ အတိအကျပြောမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဟုတ်ပါတယ်။ သူတို့က အိနြေ္ဒကို ထိန်းရတာကြောင့်ပါ။
ခဈြသူရညျးစားဖွဈခါစမှာ မိနျးကလေးတှေ ဘယျတော့မှ မပွောပွတဲ့အရာ (၅)ခု
မိနျးကလေးတှကေ နားလညျရခကျကွပါတယျ။ သူတို့ ဘာလိုခငျြလဲ၊ ဘာဖွဈခငျြလဲ၊ သူတို့စိတျထဲမှာ ဘာတှရှေိနလေဲဆိုတာကို အပွညျ့အဝနားလညျနိုငျတဲ့ ယောင်ျကြာလေး မရှိသလောကျရှားပါလိမျ့မယျ။ ဒီလို နားလညျရခကျတဲ့အထဲကမှ ခဈြသူရညျးစားဖွဈခါစမှာ မိနျးကလေးတှဖေကျက ဖှငျ့ပွောလမေ့ရှိပဲ အခြိနျကွာမှ သိလာနိုငျတဲ့ အခကျြ(၅)ခုကို ဖျောပွလိုကျပါတယျ။
၁။ ယောင်ျကြားလေး ဘယျနှဈယောကျနဲ့ အတူနခေဲ့ဖူးလဲဆိုတာ…
ဒါလေးမြား အတငျးမေးလို့ရနိုငျတာပဲလို့ ထငျမိပါသလား။ သငျအနနေဲ့ အတငျးမေးရငျတော့ မိနျးကလေးတှကေ ပွောပွမှာပါ။ ဒါပမေယျ့ တကယျအတူနခေဲ့ဖူးတဲ့ အရအေတှကျရဲ့ နှဈဆဖွဈနနေိုငျသလို ထကျဝကျလြှော့ပွီး ပွောတာလညျး ဖွဈနိုငျပါတယျ။ သူတို့ပွောတဲ့ အရအေတှကျက သူ့တို့နဲ့ပတျသကျပွီး ဘယျလိုထငျစခေငျြလဲ ဆိုတာပျေါမှာ မူတညျပါတယျ။ ဘယျတော့မှ အရအေတှကျ အမှနျကိုပွောမှာမဟုတျပါဘူး။
မိနျးကလေးတှကေလညျး အပြျောတှဲခငျြတာမြိုး ရှိပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဒီအကွောငျးကို ဘယျတော့မှပွောမှာ မဟုတျပါဘူး။ ဘယျလိုပဲဖွဈနပေါစေ။ သူတို့ကို တနျဖိုးထားတာမြိုးကိုပဲ လိုခငျြတာကွောငျ့ ဖွဈပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ အခွအေနမေဟနျရငျ သူတို့ဖကျက အကွောငျးအမြိုးမြိုးပွပွီး လမျးခှဲသှားပါလိမျ့မယျ။ ကံမကောငျးရငျ သငျ့အမှားအနနေဲ့တောငျ ခေါငျးစဉျတပျခံရနိုငျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ သူတို့က အပြျောတှဲခငျြတာပါ။
၃။ အလှပွငျပစ်စညျးတှအေတှကျ အမြားကွီးသုံးစှဲတာ….
သငျ့ကောငျမလေးက သဘာဝအတိုငျးလှပနပွေီး မနကျခငျးတိုငျး၊ ညခငျးတိုငျးမှ လှပနတေယျလို့ အထငျကွီး မစောပါနဲ့ဦး။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ မိတျကပျတှေ မသုံးပဲ လှနအေောငျ ဒါမှမဟုတျ မိတျကပျမသုံးဘူးလို့ ထငျရလောကျအောငျ သုံးရတဲ့ အလှကုနျနဲ့ မိတျကပျတှရေဲ့ ကုနျကစြရိတျက သာမနျမိတျကပျတှရေဲ့ နှဈဆလောကျရှိပွီး သငျ့တဈလစာ စြေးသုံးစရိတျရဲ့ သုံးဆလောကျ ရှိပါတယျ။
၄။ နတေို့ငျးမှာ အခွားကောငျလေးအသဈတဈယောကျကို ကွိတျကွှလေရှေိ့တာ….
ယောင်ျကြားလေးတှကေ ကောငျမလေးခြောခြောလေးတှရေငျ တဈခကျြလောကျတော့ ကွညျ့လိုကျမိသလိုမြိုးပါပဲ။ နစေ့ဉျနတေို့ငျး မိနျးကလေးတှေ စိတျထဲမှာ ကွိတျကွှမေိသှားတဲ့ ကောငျလေးတှရေဲ့ အရအေတှကျက ခနျ့မှနျးမရနိုငျပါဘူး။
၅။ အပွာကား ဘယျလောကျထိ ကွညျ့ဖူးတာ/ ကွညျ့နတော….
မြားသောအားဖွငျ့တော့ မိနျးကလေးတှရေဲ့ ကိုးဆယျရာခိုငျနှုနျးလောကျက အပွာကားမကွညျ့ဖူးဘူးလို့ ဖွပေါလိမျ့မယျ။ ကနျြတဲ့ ဆယျရာခိုငျနှုနျးက ကွညျ့ဖူးတယျလို့ ဖွရေငျတောငျမှ ဘယျလောကျမြားမြားကို ကွညျ့ဖူးလဲဆိုတာ အတိအကပြွောမှာ မဟုတျပါဘူး။ ဟုတျပါတယျ။ သူတို့က အိန်ဒွကေို ထိနျးရတာကွောငျ့ပါ။
Previous: အရင်းအနှီးနည်းနည်းနဲ့ အောင်မြင်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ နည်းလမ်း(၄)ခု
Next: အလုပ်မှာ စိတ်မပါတဲ့အခါ ဒီနည်းလမ်းတွေနဲ့ အားပြန်ဖြည့်လိုက်ပါ